Dad loo qabtay weerarkii ka dhacay Beledweyne - Awdinle Online
Dad loo qabtay weerarkii ka dhacay Beledweyne
Taliska Booliska Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay weerar loo adeegsaday Bam Gacmeed oo xalay lagu qaaday Goob maqaaxi ah oo ku taalla xaaladda suuqa xoolaha ee Baladweyne.
Taliyaha Saldhiga Booliska Baladweyne Maxamed Maxamuud Rooble ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday maqaaxida uu ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah, waxaana meel aan sidaas uga fogeyn maqaaxida Saldhig ku leh Ciidanka AMISOM.
Waxaa uu sheegay Taliye Maxamed Rooble in weerarka kadib Ciidamo ka tirsan kuwa amniga Magaalada ay bilaabeen howlgalo kala duwan oo lagu raadinayo dadkii ka dambeeyay weerarkaas.
Taliyaha Booliska ayaa tilmaamay in howlgalka inta uu socday lagu soo qabtay dad dhowr ah oo u badan dhalinyaro, kuwaasi oo loo shakisan yahay inay fuliyeen weerarkii xalay, isla markaana laamaha amniga dadkaas ay ku wadaan baaritaano kala duwan.
Isaga oo sii hadlaayay Taliye Maxamed Roobe ayuu sheegay in warbaahinta ay la wadaagi doonaan natiijada kasoo baxday howlgalka Ciidanka oo weli socda, wuxuuna Carabka ku dhuftay inay sii wadi doonaan howlgalka amniga lagu xaqiijinayo.
Previous articleMahdi Guuleed oo Magacaabis sameeyay, xilli Ra’iisul……
Next articleAl-Shabaab oo gacanta ku dhigay Diyaarad Drone ah oo dhacday